Malunga ne-US | Oomatshini bakaShangrui
Umatshini weShangrui Co., ltd. ikwiphondo laseShundu, kwiPhondo laseGuingdong
UShangrui lishishini lale mihla elidibanisa uyilo, uphuhliso, imveliso, intengiso, ukuthengisa, ukuthengisa kunye nenkonzo yasemva kwentengiso. Ngeqela eliphezulu le-Elite, izixhobo ezihle kakhulu zemveliso kunye nezixhobo zokuvavanya. Ukuhlolwa kwemveliso, iinkqubo zokulawula umgangatho ziphuculwe ngokungqongqo.
Ukuzibandakanya kwimveliso yeebhodi ezahlukeneyo kunye nezixhobo zefenitshala oqinileyo, ngokweemfuno ezahlukeneyo zabathengi ukuba ziyile kwaye zivelise oomatshini abangengowomileyo.